Manampahefana Syriana telo karohin’i Lafrantsa noho ny fahafatesan’ny Frantsay-Syriana miisa roa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2018 14:30 GMT
Tao anatin'ny hetsika tsy fahita firy lazaina ho kintana fitarikandron'ny vanim-potoana vaovao anjakan'ny rariny ho an'ny lasibatry ny heloka an'ady sy ny heloka mandripaka ny zanak'olombelona ao Syria, namoahan'ny mpitsara frantsay didy fampisamborana tamin'ny novambra 2018 lasa teo ny manampahefana syriana ambony ara-pitsikilovana miisa telo izay voampanga ho miray tsikombakomba amin'ireo heloka voalaza etsy ambony ireo.
Karohina ireo manampahefana ambony miisa telo ireo noho ny fitazonana sy ny fanjavonan'olona roa mizaka zom-pirenena frantsay-syriana miisa roa: Mazen Dabbagh sy ny zananilahy Patrick. Nosamborin'ny mpiasan'ny fitsikilovan'ny Tafika an'habakabaka Syriana izy mianaka ireo tamin'ny novambra 2013 ary notazonina tao amin'ny seranam-piaramanidina ara-miaramila Mezzeh.
Namela alo-pahafatesana sy faharavana ny ady Syriana. Ny tombana no nametraka ny isan'ireo nanjavona hatramin'ny marsa 2011 ho mihoatra ny 95.000, ka mihoatra ny 80.000 no inoana fa nampanjavonin'ny fitondram-panjakana syriana. Maro ireo maty tany am-pihazonana noho ny fampijaliana malaza ratsy ataon'ny fonja sy ny toeram-pihazonan'ny fanjakana.
Taorian'ny fandarohana baomba ny ‘vaomieran'ny krizy’ (cellule de crise) tao Damaskosy tamin'ny Jolay 2012, dia notendrena ho Talen'ny Biraon'ny Fiarovam-Pirenena i Mamlouk, misolo toerana an'i Hisham Bakhtiyar izay maty noho ny ratra nahazo azy tamin'io fandarohana baomba io.
Minisitry ny fampahalalam-baovao Libaney teo aloha, Michel Samaha, nanao fiaikena ho nandray vola avy amin'i Mamlouk hamono olo-malaza ara-politika libaney. Namoahan'ny manampahefana Lobaney didy fampisamborana i Mamlouk tamin'ny 4 febroary 2013.
Tamin'ny taona 2015 niely ny tsaho fa nanam-pikasana ny hiala an-daharana izy ka nosamborina sy napetraka tamin'ny trano manokana tsy azony ivoahana. Nisy ihany koa ny tsaho momba ny toe-pahasalamany milaza fa eo am-pialan'aina ao amin'ny hopitalin'i Damaskosy izy. Ho fandravana izany tsaho izany, nitsidika an'i Jeddah, Arabia Saodita ary Muscat, Oman izy. Nitsidika an'i Rome, Italia ihany koa izy tamin'ny faran'ny volana febroary 2018, tsy miraharaha ny sazin'ny Vondrona Eoropeana (EU) tamin'ny May 2011 izay mandrara azy tsy hahazo hivezivezy sy ny fanagiazana volany any amin'ny banky izay mifandraika amin'ny fiampangana azy ho mitarika ny herisetra atao amin'ireo mpanao fihetsiketseham-panoherana ny governemanta syriana.
Notendrena ho talen'ny fitsikilovana ao amin'ny tafika an'habakabaka i Abdul-Salam Mahmoud tamin'ny taona 2010. Voarohirohy amin'ny famonoana sivily syriana izy ka tafiditra amin'izany ireo lasibatry ny fandripahana tao Saida tamin'ny Avrily 2011, anisan'izany i Hamza al-Khatib, zazalahy 13 taona izay tapatapaka ny vatany taorian'ny fisamborana azy ka lasa saombôlin'ny revolisiona Syriana sy endriky ny habibian'ny fitondrana amin'ny mpanao fihetsiketsehana. Voasazin'ny Vondrona Eoropeana i Mahmoud hatramin'ny taona 2012.
Tamin'ny volana jona lasa teo, efa namoaka didy fampisamborana an'i Hassan ihany koa i Alemaina. Nitatitra ny gazety alemà Der Spiegel fa nampangain'ny mpitsara mpanao famotorana ho manaramaso ny heloka nataon'ny fiarovana syriana izy ka tafiditra anatin'izany ny fampijaliana, ny fanolanana ary ny famonoana olona anjatony tanelanelan'ny taona 2011 ka hatramin'ny taona 2013.
Tsy nanasonia ny Satan'i Roma i Syria ka tratran'ny veto apetrak'i Shina sy i Rosia izay rehetra fikasana hiantso ny Fitsarana Ady Heloka Iraisampirenena (CPI) — hery anankiroa manana veto ao amin'ny Vaomieran'ny Fiarovana ao amin'ny Firenena Mikambana sady mpiara-dia tsy mivena amin'i Assad — manakana tanteraka ny fahafaha-mamotopototra heloka an'ady ao Syria sy izay mety hitondrana ireo mpanao izany heloka an'ady izany eny amin'ny fitsarana.
Na izany aza dia kely ny fanantenana hahazoana ny rariny sy fanonerana. Tamin'ny jolay 2018 ny governemanta syriana namoaka nisesisesy tsy nisy tahaka izany filazana manjò ireo gadra politika, milaza ny antom-pahafatesana ho “fihetsehan'aretim-po.”